Shaxda Madaxweyne Erdogan iyo shidaalka Soomaaliya – Hornafrik Media Network
MADASHA HORNAFRIKMAQAALOSomali News
By Liibaan Nuur	 On Jan 24, 2020
Soomaaliya ayaa mar kale u tallaaba-qaadday ka faa’iidaysiga kheyraadka shiidaalka, kaddib markii Aqalka Sare ee Baarlamaanka uu ansixiyay January 6, 2020 Sharciga Batroolka dalka. Walow sharcigu uu soo raagay, haddana waxaa la filaayaa inuu soo jiidan doono maalgashiga shirkadaha shidaalka caalamiga ah.
Balse, waxaa murugo ka taagan tahay in ansaxintii sharciga uu ku soo beegmay xilli olole doorasho, iyo rabshado argaggixiso dalka ay ka bilowdeen, taas oo baqdin gelin karta maanka maalgashatada shisheeyaha.
Haddaba, su’aashu waxay tahay: Maxaa muhiim ka dhigaya udugga saliidda Soomaaliya laga sheegayo?
Tobankii sanadood ee la soo dhaafay, waxaa si xoog leh looga helayay gaaska dabiiciga ah iyo saliidba, inta u dhaxeysa Mozambique iyo Kenya.
Warbixin uu qoray wargeys ka soo baxay Houston Wasiirka Shidaalka iyo Macdanta, Cabdiraxmaan Maxamed Axmed wuxuu ku yiri, “Muhiimadeenna maanta waa inaan caddeynaa jiritaanka harooyin kayd iyo xaqiijinta mugga saliidda” (Chron – 12/02/2019).
Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay February 7da, 2019 macluumaad laga soo uruuriyay sahmintii Spectrum ee “Juba-Lamu Basin, Coriole Basin, and Obbia Basin.” Halkaas, waxaa ka soo ifbaxay in dalku uu ka mid noqon karo mid ka mid ah baraha saliidda ugu muhiimsan ee xeebaha Bariga Afrika.
Walow dhulka Soomaaliya shidaal laga baarayay tan iyo 1956dii, haddana saliidda dhawaan lagu sheegay xeebaha Soomaaliya waxaa muhiim ka dhigaya baaxadda kaydka iyo waddanka oo ku dhow suuqyada Aasiya (Hindiya iyo Shiinaha), kana fog colaadda Bariga Dhexe.
Shirweynihii shidaalka qaaradda Afrika ee November 2019 ka dhacay magaaladda Cape Town, ee dalka Koonfur Afrika ayaa Wasiir Cabdiraxmaan Maxamed Axmed ku ballan qaaday in Dowladda Federalka Soomaaliyeed ay billaabi doonto sanadka 2020 shati bixinta 15 xirmo.
War laga soo xigtay wargeyska Financial Times ayaa sheegaya, in Shirkadaha Royal Dutch Shell iyo Exxon Mobil ay safka hore uga jiraan maalgashiga kheyraadka badda Soomaaliya, waxaase muuqan shirkadda Talyaaniga ENI Energy oo magac weyn ku yeelatay helidda gaaska Mozambique.
Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegayaa in ENI Energy oo shuraaka kula ah Imaaraadka Carbeed sahminta aagga badda Soomaaliyeed ee Kenya ay sheeganeyso inay ku sugan tahay xaalad ishaa falateen ah (wait and see).
Si kastaba ha ahaatee, kharashyada wax soo saarista oo sii kordhaya iyo macaashka laga helaaya oo hooseeyo ayaa shirkadaha waaweyn ee saliidda iyo gaaska ka hakinaya inay foodda daraan khatarta aan la ogeyn. Taas ayaa shirkadaha yaryar horumuud uga dhigtay sahminta saliidda iyo gaaska gobolka, kuwaas oo ku dhiirran u bareeridda khatarta maaliyadeed iyo ka howlgalka dhul aan hore loo tijaabin sahmintiisa.
Dhinaca kale, waxaa soo kordhaya ifafaale tilmaamaya in shirkadda Fransiiska TOTAL oo shuraako kula ah “Qatar Petroleum,” baarista saliidda Kenya iyo Namibia ay daneyneyso saliidda Soomaaliya, waxaase lama filaan noqotay, in Madaxweyne Recep Tayib Erdogan uu ku dhawaaqo in Muqdisho ku casuntay sahminta saliida Soomaaliya.
Suuqa shidaalka adduunku wuxuu soo maray marxalado kala duwan. Shirkadaha shidaalka caalamiga ah waxay 60-yadii xuquuqda hantida “royalties” u siin jireen dalka shidaalka laga helo 1.80 doolar barmiilkii. Arrintaas waxay isbeddeshay kadib markii 1973kii uu shidaalka adduunka galay khalkhal, taas oo keentay in la kordhiyo xuquuqdaas.
Haddaba su’aashu waxay tahay: Maxaa ku kallifay Madaxweyne Erdogan inuu warkiisa warbaahinta u soo mariyo Soomaaliya, asagoo heli karo habab ka habboon?
Baaqa Madaxweyne Erdogan, wuxuu siday farriin u baahan in la dhuuxo nuxurkeeda. Yuusuf Gaandi oo ka faallooda siyaasadda “Horn of Africa Geopolitics” ayaa yiri, “Siyaasaddu ma aha oo keliya inta muuqata ee waxaa loo baahan yahay in la fahmo inta miiska hoostiisa ka socota.”
Turkiga wuxuu ku soo galay Soomaaliya ujeeddooyin laysku ogaa, hase yeeshee isbeddelka siyaasadda Maraykanka ee ku jahaysnayd dagaalka xagjiriinta Geeska Afrika, ayaa diblomaasiyadda nabadda u gacan banneysay Boqortooyadda Sacuudiga iyo Imaaraadka Carbeed, iyadoo aan loo cayimin xuduudaha ay ciyaari karaan.
Maanta, waxaa muuqata in Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya ay ka jiraan qalalaaso u baahan xal degdeg ah.
Falanqeeyaasha siyaasadda waxay rumeysan yihiin in xalkii Turkiga ee Syria iyo Libya uu beddelay isla-ekaanta cududda, taas oo dalal badan ku qasabtay inay dib uga fiirsadaan ujeeddooyinkoodii siyaasadeed.
Miyaysan haddaba, afeefta Erdogan u muuqan inay u socoto dalal aan la magac dhabin, balse door ku leh fidnada Soomaaliya, iyadoo loo sii marsiinayo Ingiriiska oo iskuduwe ka ah mashruuca Geeska Afrika.
Sidoo kale waxaa muhiim ah, in dalalka gobolka ay u baahan yihiin inay iska kaashadaan, islamarkaasna iska caabbiyaan faraggelinta Amiiradda Imaaraadka Carbeed ee meel ka dhaca ku ah siyaasadooda gudaha iyo xuriyaddooda qarannimo, iyadoo la soo dhaweenayo iskaashiga faa’iidada labada dhinac ku dhisan.
Madaxweyne Erdogan, waxuu hurdada ka kiciyey shirkadaha shiidaalka ee quuddarraynaaya kheyraadka Soomaaliya, balse aan maalgashi diyaar u ahayn inay sameeyaan xilligan, sababo amni awgood.
W/Q: Cabdulqaadir Cariif Qaasim